BBC Somali - Cayaaraha - Kooxda Chelsea taariikh cusub ayay dhigtay
1 Febraayo, 2011, 16:30 GMT 19:30 SGA
Kooxda Chelsea taariikh cusub ayay dhigtay
Ciyaartoy Fernando Torres
Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa jebisay heerkii taariikhda ee lacagta ciyaartoyda lagu kala iibsado iyadoo laacibka Liverpool ee Fernando Torres ku soo qaadatay 50 milyan oo geniga Sterling ah. Torres waa 26 jir u dhashay dalka Spain una ciyaara kulanka qaranka Spain, waxaana uu kooxda Chelsea u saxiixay inuu shan sano iyo bar u ciyaari doono.
Isagoo arrintan ka hadlayay waxaa uu yiri waa higsashada ciyaartoy kasta ee kubadda cagta inuu u safto mid ka mid ah kooxaha adduunka ugu heerka sarreeya. Waxaana uu sheegay in Chelsea ay ka mid tahay kooxaha Yurub ugu waaweyn, mar walbana ay u halgamaan inay koob kasta qaadaan. Soo iibsashada Torres waa mid xiisa badan leh iyadoo kooxaha Chelsea iyo Liverpool ay yihiin kuwa iibsaday afarta ciyaartoy ee ugu waaweyn ee hadda la kala gatay.
Liverpool waxay u muuqataa inay dabooshay meeshii uu banneeyay Torres iyadoo soo iibsatay labo ciyaartoy oo weerarka ka ciyaara oo kala ah: Luis Suarez oo u dhashay dalka Uruguay oo 22.7 milyan oo geni ay kaga soo qaadatay kooxda Ajax iyo Andy Carroll oo kooxda New Castle ay kaga soo gadatay 35 milyan oo geni.
Chelsea waxay kaloo soo gadatay laacibka difaaca ka dheela ee David Luis oo kooxda Benfica ka tirsanaa. Waxayna ka bixisay 21.3 milyan oo geni. Laakiin waa qaadashada Torres midda farriinta xoogga leh diraysa in kooxda Chelsea ay weli tahay tan ugu xooga badan suuqa ciyaartoyda lagu kala iibsado.
Torres oo ka mid ahaa kooxdii xulka qaranka Spain ee koobka adduunka qaadday sanadkii hore ee 2010 iyo kooxdii Spain ee qaadday horyaalka Yurub sanadkii 2008dii, waxaa uu kooxda Liverpool u ciyaarayay saddex sano iyo bar kaddib markii ay 20 milyan oo geni kaga soo qaadatay kooxda Atletico Madrid, waxaana uu Liverpoll u dhaliyay 81 gool muddadii uu u dheelayay oo uu u saftay 142 kulan.
Torres markii uu ka hadlayay ku biiridda Chelsea waxaa uu yiri aad ayaan ugu faraxsanahay inaan halkan joogo, waxaana uu diyaar u yahay inuu kooxda Liverpool ka hor yimaad maalinta Axadda soo socota oo Chelsea ay kulan horyaalka ka tirsan wada ciyaarayaan. Waxaa uu sheegay in Chelsea ay ku jiraan ciyaartoy badan oo heer sare ah hase ahaatee uu ku dadaali doono inuu meel ku yeesho kooxda. Waxaan aad u rajeynayaa inaan kooxdeyda cusub gacan ka siiyo kulammada xiiligan soconaya iyo kuwa sannadaha badan ee soo socda, ayuu yiri Torres. Waxaana uu intaas raaciay in riyadiisu tahay inuu qaado koobka horyaalka Yurub isagoo Chelsea u ciyaaraya, waana hubaa ayuu yiri inaan qaadi karno.
Tababaraha Chelsea Carlo Anceloti waxaa uu afar kulan oo ka mid ah shantii ciyaarood ee ugu dambeeyay weerarka ka dheelsiiyay Drogba iyo Anelka, waxaana muddadaas laga badiyay hal ciyaar oo keliya oo kooxda Wolves ay 1-0 kaga badisay. Torres waxaa uu sheegay inuu taageere weyn u yahay ciyaartoyda Chelsea oo dhan. Waxaa uu sheegay in markii uu yaraa uu daawan jiray Anelka oo Arsenal u ciyaari jiray, Drogba-na waxaa uu sheegay inuu u arko weerar-yahanka adduunka ugu fiican. Waxaana uu sheegay inay tahay mas'uuliyad weyn in uu ka barbar ciyaaro sababtoo ah heerkooda oo sarreeya.
Torres waa laacibka 4aad ee adduunka ugu qaalisan marka laga yimaad Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibramovic iyo Kaka. Guddoomiyaha Chelsea Bruce Buck oo ka hadlay soo qaadashada Torres waxaa uu sheegay inay maalin weyn u tahay Chelsea inay soo qaadato mid ka mid ah ciyaartoyda adduunka ugu wanaagsan oo weli waqtigii ugu fiicnaa uu hortiisa yaallo. Wuxuuna sheegay inuu filayo in taageerayaasha Chelsea oo dhan ay sidiisa oo kale ugu faraxsan yihiin ku soo biiridda Torres.
Qaza oo 12 saac laga joojinayo duqeynta
Mucaaradka CAR oo diiday xabad joojinta